Dambena pituitary duritaanka - Shiinaha Ningbo Hormone Labaad
Dambena pituitary duritaanka
Dambena pituitary duritaanka dambena pituitary waa wax soo saarka ah oo dhan dabiiciga ah-diyaariyey by fiirsato ka qanjirka pituitary doofaarka. [Description] wax soo saarka Tani waa dareere ah midab hufan ama ku dhowaad hufan. [Function iyo isticmaalka] wax soo saarka waxa uu ka koobanyahay oxytocin iyo pitressin. Oxytocin Dhectuuro kartaa uteruses eegista iyo xoojiyo foosha ee muruqyada siman, makaanka. Its saamayn muruqyada siman, makaanka oo xiiso leh kala duwan yihiin sida ay qaadasho iyo heerarka hormone in vivo. A dose o yar oo ...
Dambena pituitary waa ah wax soo saarka oo dhan-dabiici ah loo diyaariyey by fiirsato ka doofaarka pituitary qanjirka.
Alaabta Tani waa dareere ah midab hufan ama ku dhowaad hufan.
Alaabta Tani waxaa ku jira oxytocin iyo pitressin. Oxytocin Dhectuuro kartaa uteruses eegista iyo xoojiyo foosha ee muruqyada siman, makaanka. Its saamayn muruqyada siman, makaanka oo xiiso leh kala duwan yihiin sida ay qaadasho iyo heerarka hormone in vivo. Qiyaas yar oo alaabta this kobcin karaan foosha jiibta muruqyada makaanka marka xanuunka foosha ku labisan iyo nasashada xilliga uurka ka soo daahay, qaadasho badan oo wax soo saarka ka dhigi doonaa foosha tetanic ee makaanka muruqyada siman oo riix xididdada dhiigga ee myometrium oo aad ku isticmaali saamaynta hemostatic. Intaa waxaa dheer, oxytocin kor u qaadi kartaa foosha unugyada myoepithelial agagaarka marinnada acini iyo caanaha caanaha, fududeynta ejection ah oo caano ah. Pitressin leedahay saamaynta antidiuresis oo kor u cadaadiska dhiigga. Waxaa inta badan laga codsadaa in:
1. disorder dhalmada ee ejection caanaha, barar caanaha, iyo kor u qaadida nuujinta, xoolaha dhaddiga ah dhowaan u dhiibay ka maqan oo caano ah, caanaha la saaray karaan 1-4 saacadood ka dib markii la isku duro.
2. dag dagi parturition iyo odinopoeia.
3. Hemostasis for hemorrhage weyn sac '.
4. dhalmada dhiig, makaanka iyo ceshan xuubka uurjiifka.
1. disorder dhalmada ee ejection caanaha, barar caanaha, iyo kor u qaadida nuujinta, xoolaha dhaddiga ah dhowaan u dhiibay ka maqan oo caano ah: dose hal for duridda: 20-40 unug oo fardaha baaluq iyo lo ', hal mar maalintii muddo 3 maalmood oo isku xigta; 10-20 unug u bixiyaa idaha iyo doofaarro baaluq, hal mar maalintii muddo 3 maalmood oo isku xigta; 5-10 unugyo ah eyda, bisadaha, Dawacooyinku, racoon-eeyaha iyo minks, hal mar maalintii muddo 3 maalmood oo isku xigta.
2. parturition dagdagi iyo odinopoeia: dose hal duro subcutaneous ama duridda: 30-100 halbeeg oo fardaha iyo lo ', 10-50 unug u bixiyaa idaha iyo doofaarrada, 2-10 unugyada for eeyaha; 2-5 halbeeg bisadaha.
3. Hemostasis for hemorrhage weyn sac ': duro xididka; 100-150 unugyada for dose hal (ku daray in 500ml of glucose ama sodium duro chloride).
4. dhalmada dhiig, makaanka iyo ceshan xuubka uurjiifka: dose hal duro subcutaneous ama duridda: 30-100 halbeeg oo fardaha iyo lo ', 10-50 unug u bixiyaa idaha iyo doofaarrada, 2-10 unugyada for eeyaha; 2-5 halbeeg bisadaha.
1. ahaan uu u soo dhowaaday wakhtigii shaqada ee aan caadi ahayn marinka dhalmada, booska uurjiifka aan caadi ahayn, oo haddana-ka-furan cervixes.
2. qaadasho sare u qaadis keeni kartaa dhiig-karka, oliguria iyo calool xanuun.
10 x 1ml: 10 units
Hadhka iyo kaydiyaa meel gudcur ah oo qaboow (hoos heerkulka of 20 ℃).
Previous: Pituitary farabadan oo Hormone Durayo (LH)
Next: Uurka Mare Serum Gonadotropin Durayo (PMSG)
Pituitary farabadan oo Hormone Durayo (LH)
Cloprostenol Sodium duritaanka (D nooca PG)
Gonadotropin Durayo (GnRH)